HRSG: injongo nezinhlobo
HRSG yenzelwe ukusetshenziswa emsebenzini wokukhiqiza ukushisa okuyinto wasimama amagesi ezivezwa amayunithi ezahlukene ezimbonini kanye yangaphakathi omlilo izinjini. Amadivayisi anjalo ayixhunyiwe kunoma lokushisa esithandweni ukunikeza kuphela kusukela igesi qeda. Ezinye boilers imfucuza ukushisa, abe cooler inqubo igesi ngesikhathi ukukhiqizwa kwe-sulfuric acid.
Ngokuvamile, umusi isetshenziswa embonini Metallurgical imfucuza-ukushisa kubhayela. It lokushisa igesi ifinyelela +400 ° C, futhi lapho sisebenzelana amaziko steel - +1500 ° C. Uma umkhiqizo we ibhizinisi akuyona okusezingeni eliphezulu kunjalo, imishini impela nge kwegazi futha. Ngenxa design yayo, ngentukuthelo yokutakula kubhayela cishe ephephile imvelo, kusukela ubuncane likhipha ukungcola. Ngaphezu kwalokho, kuyinto ukonga, ngoba izindleko gas yokuhlanza Liyindawo ongaphakeme, futhi isebenzisa uphethiloli kahle.
HRSG umusi ngokuvamile efakwe diesel amandla igesi yemvelo izitshalo, microturbines, udizili boilers, njll Esikhathini uwoyela umkhakha carbon monoxide akhicitwe nakuchubeka ukusebenza injini, it is eshiswa khona amandla kagesi. Amanzi okuholela is ibe umusi ikhishwe ngaphandle. Le ndlela kucutshungulwa izenzo igesi futhi yokusansimbi. Isitimu ngezinye izikhathi lisetshenziselwa e izidingo zobuchwepheshe amabhizinisi inkokhelo lapho idingeke khona. Futhi kukhona ukuncipha amanzi ashisayo izindleko (ngokusebenzisa irisidi yayo kubhayela). Izinsalela okukhipha imfucuza impahla ngokusebenzisa kushimula.
Ukwakheka-utilizers boilers ehlukile. Ngaphandle imodeli ngenhla, lapho uphoqelekile imodeli kwegazi ne kwegazi zemvelo. Futhi ukuhlukanisa lo mshini sigubhu ngaphandle kwalo. Ezinye izinkampani bayatfutfuka onobuhle-oda angawodwana kucatshangelwa imininingwane indawo yokufaka (isib, kwendlu noma ngaphandle).
Kuye injongo, kukhona ukuchitha ukushisa boilers and umusi kokuba afterburning apharathasi nomunye, ababili noma abathathu amazinga ingcindezi ezidinga obandayo enezingqimba noma mpo, nabanye abaningi. Kunezinhlobo eziningi udoti ukushisa, ngaphandle converters (i-ayoni futhi izinsimbi non-ayoni) , noma imithombo esetshenziswa (coke, ingilazi, isipanji yensimbi, steel kanye nezinye izinto).
Uzinake Modular HRSG umusi, okuyinto bafakwe ukufakwa igesi flue alula kakhulu kunomoya abanye futhi ayidingi imali eshisiwe. Isebenza thembeke ngaso iyehla iyenyuka njalo lomthwalo, kanye omuhle kakhulu ukushisa ukudluliselwa.
Ngaphambi kokufaka, kumelwe uthole ukuthi yini uhlobo amandla ibusa elilodwa noma kwenye kubhayela ukushisa yokutakula. Ejwayelekile imishini umthamo kusuka 120 kW kuya 1700 kW. Kuze kube yimanje, kuyinto efiselekayo ubheke inkampani Ochwepheshe ukulingana kubhayela, ukuze bakwazi ukusho kusengaphambili ukuthi yimuphi imodeli Kungcono ukuthenga. Ukuze inkonzo utilizers enikeziwe isitebhisi kanye ezisekelweni.
Indlela ukukhetha ewindini plastic
Ukufakwa iqhwa onogada ngezandla zabo: ubuchwepheshe, izici kanye nokubuyekeza
Izinhlobo yesondlo. Nokugcinwa nokulungiswa imishini
Kusilungisi Electric ngommese - ithuluzi esinokwethenjelwa ukunakekelwa utshani
Esesicabheni kukhethwe kahle - lokuvikeleka kwezifiso ezisemqoka ezingumphumela efulethini kwabantu bangaphandle
Isilinganiselwa izando ikhaya
Amazwe oil-producing, okuyizinto abaholi embonini
Igazi amaqembu igazi: imithetho. abanikeli Universal. zamaqembu egazi kwedivayisi Ithebula
Ukwelashwa Tinsita amanzi chemical: incazelo umsebenzi, ikakhulukazi ukuqeqeshwa impendulo
Sberbank, "Avtoplatezh for Umbuso indawo Tinsita": incazelo, uxhumano futhi impendulo
Kuyini ukheshi isiphetho isevisi ngabanye?
Roll mackerel: ukupheka iresiphi. Umqulu mackerel kuhhavini
Self-imfundo aphansi othisha esikoleni njengoba isu siqu ukuze uthisha
Nethezeka ku Krasnodar Territory: Arkhipo-Osipovka, abezimboni ezizimele
Indlela uthole isitifiketi kobunikazi ifulethi?
Indlela ukubhaka imana
Uyini Usayizi cluster?